Inqwelo moya yabakhweli yengozi kunye nokutsha eTexas, abantu abangama-21 bayasinda
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Inqwelo moya yabakhweli yengozi kunye nokutsha eTexas, abantu abangama-21 bayasinda
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Inqwelo moya yabakhweli yengozi kunye nokutsha eTexas, abantu abangama-21 bayasinda.
Ngokuka-sheriff wasekhaya u-Troy Guidry, bonke abakhweli abangama-21 kunye neqela labasebenzi beliphumile bekhuselekile, nangona umntu omnye ebelaliswe esibhedlele ngenxa yokulimala emqolo.
Ingozi yenzeke eWaller County, kufutshane nedolophu yaseKaty, kwaye kufutshane nesikhululo senqwelomoya saseHouston.
Ngaphandle komonakalo omkhulu womlilo kwinqwelomoya, akukho nzakalo ixeliweyo, nokuba kusezantsi okanye phakathi kwabagibeli.
Inqwelomoya yabakhweli, i-MD-80, yayisuka malunga ne-10 kusasa lendawo, isiya eBoston, eMassachusetts.
Inqwelomoya yabakhweli yatshayisa yaza yatshisa eWaller County, kufutshane nedolophu yaseKaty, Texas kwaye kufutshane ne Isikhululo senqwelomoya saseHouston namhlanje, ngokweSebe lezoKhuseleko loLuntu eTexas.
Inqwelomoya yabakhweli, kunye ne-MD-80, yehla yaza yagqabhuka yangamadangatye, ngokuhambelana nomfanekiso omangalisayo ovela kwindawo leyo.
Kuyamangalisa ukuba bonke abantu abangama-21 ababekhwele babekwazi ukubaleka kwinqwelomoya, amagosa asekuhlaleni athi.
Imifanekiso evela kumfanekiso ibonisa amafu amakhulu omsi omnyama njengoko abacimi-mlilo bezama ukucima ubushushu.
Indawo yengozi yayikufutshane nekona yeendlela zikaMorton kunye neCardiff. Ngaphandle komonakalo omkhulu womlilo kwinqwelomoya, akukho nzakalo ixeliweyo, nokuba kusezantsi okanye phakathi kwabagibeli.
Ingozi yenzekile njengoko inqwelomoya, i-MD-80, yayisuka nge-10 kusasa ngexesha lendawo, isiya eBoston. Ijongise emantla, kuyacaca ukuba ayiphumelelanga ukuphakama ekupheleni komgaqo weenqwelo-moya kwaye yawela indlela endaweni yayo, ekugqibeleni yema yabamba umlilo.